त्यो डा. कल्याण भन्नेले हाम्रो अडिसनको भिडियो अघि र पछि काटेर बीचको अलिकति मात्रै राखेछ । मलाई नराम्रो देखाउन त्यसो गरिएको हो । उसलाई चर्चित हुनुपरेको होला । मसँग खेल खेलेको हो । कुन प्रसङ्गमा भनिएको कुरालाई बीचमा अलिकति हाइलाइट गरेर राखिएकाले त्यसमा म छुच्ची देखिएँ । त्यसपछि के चाहियो र ? सबै पछि लागिहाले । के भएका होला मान्छेहरू ! पोहोर माल्भिकालाई अट्याक गरियो, यसपालि म परेँ ।